Health care coverage - spa / Minnesota Department of Human Services
Caynsanaan daryeel caafimaad
Qoysas badan oo reer Minnesota ah ayay la soo wajaheen wakhtiyo adag sababo la xiriira safmareenka COVID-19 awgeed. Way adkaan kartaa in la iska bixiyo kharashka daryeelka caafimaadka markay u weheliyaan dhammaantood biilasha kale. Haddii adiga ama qof aad taqaanno aydaan lahayn caymis caafimaad ama la idinka hakiyay shaqada ama la jaray saacadaha shaqadiina, caawimo ayaa la heli karaa.
Ka-tijaabinta COVID-19 oo bilaash ah
Haddii aydaan caymis lahayn
Dad badan oo reer Minnesota ah oo aan caymis lahayn ayaa laga tijaabin karaa cudurka COVID-19 iyada oo aan wax kharash ah ugu fadhiyin muddada lagu jiro xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadwaynaha. Si aad ugu hesho caynsanaan bilaash ah oo loogu talagalay ka-tijaabinta, waa inaad:
Ahaato deggane Minnesota
Ahaato muwaaddin Maraykan, U dhashe Maraykan ama qof aan muwaddin ahayn oo si sharci ah ku jooga oo leh heer socdaal uu ugu qalmo Gargaar Caafimaad (Medical Assistance).
Bixiso lambarkaaga Sooshiyal Sekuuritiga haddii aadan lahayn ka-dhaafidda la'aanteeda.
Aadan ku qornayn midnaba caymis caafimaad kale.
Weyddiiso bixiyaha daryeelka caafimaadka ka-tiijaabinya cudurka COVID-19 codsiga lagu cayminayo qiimaha ka-tijaabinta. Bixiyaha ayaa gudbin doonaa codsigaaga, oo waxaad ku heli doontaa boostada ogeysiin ku saabsan haddii laguu oggolaaday ama laguu diiday.
Ama, onalyn tag oo ka daabaco codsiga laftaadu barta internetka https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-7310-SOM oo buuxi dhammaan.
Ku xirnow jiheeye jaaliyaddada ka tirsan oo kaa caawiya inaad isqorto. Jiheeyeyaasha ayaa kugu caawin kara dhowr luqadood oo kala duwan. Ka raadi hagaha tusaha luqadda kuugu fudud ee aad kula xiriiri karto.
Waxa kale oo aad ka wici kartaa kooxda Taageerada Macaamiisha Daryeelka Caafimaadka ee DHS telefoonnnada 651-431-3994 ama 800-366-5414 si aad u weyddiisato in codsiga boostada laguugu soo diro.
Barta internetka COVID-19 ayaa bixisa marin u-helitaanka goobta kuugu dhow ee ka-tijaabinta, oo bixisa macluumaadka guud ee la xiriira dillaaca cudurka COVID-19, waxayna leedahay aalad ka-baaritaan la macaamil leh si ay kaaga caawiso inaad go'aansato haddii aad u baahan tahay ka-tijaabinta cudurka.
Haddii aad leedahay Medical Assistance ama MinnesotaCare
Haddii aad ka hesho caynsanaantaada daryeelka caafimaadka adiga oo u mara Medical Assistance ama MinnesotaCare, ma bixin doontid kharash-wadaag, oo ay ku jirto wada-bixin ama wax ka jarka, loogu talagalay ogaanshaha, ka-tijaabinta iyo daawaynta COVID-19.
Ma u baahantahay caynsanaan daryeel caafimaad?
Barnaamijyada daryeelka caafimaadka dadwaynaha ee Minnesota ayaa siiya caynsanaan daryeel caafimaad reer Minnesotaha u dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa u dakhli la'aanta ah. Waxaan ku dhiirigelinaynaa qof kasta oo u baahan caynsanaan daryeel caafimaad inuu codsado si uu u ogaado haddii aad u qalanto Medical Assistance ama MinnesotaCare, oo ay ka mid yihiin kuwa reer Minnesota ee saacadaha shaqada laga dhimay, ama shaqada laga hakiyay muddo ama kuwa shaqooyinkoodii waayay.
Medical Assistance ayaa ah barnaamijka Medicaidka Minnesota. MinnesotaCare waa barnaamij salka ku haya bixin qaddar-xilliyeed loogu talagalay dadka ku kasbada in aad uga badan in loo qalmo Medical Assistance laakiin u dakhligoodu ka yaryahay inay iibsadaan caymiss caafimaad shirkadaha gaarka ah. Kuwa uqalma MinnesotaCare waligood ma bixiyaan in ka badan $80 bishii qofkiiba bixintooda qaddar-xilliyeedka. Barnaamijyadu waxay leeyihiin xaddidyo dakhli iyo hantida oo ku xiran da'daada, cidda aad la nooshahay, iyo haddii aad uur leedahay, ama indhoole ama aad naafo tahay. Waxay bixiyaan caynsanaan dhammaystiran, oo ay ku jiraan dheefo caafimaadka ilkaha iyo aragga ah iyo adeegyada caafimaadka habdhaqanka ah.
Sida loo codsado
Reer Minnesota badankood ayaa ku codsan kara barnaamijyadan onlayn iyaga oo mara MNsure, oo ah suuqa caymiska caafimaadka ee Minnesota. Waa kuwan qaarkood talooyinka loogu talagalay buuxinta ku codsiga onlaynka ah ee MNsure. Faahfaahin intaa ka badan codsashada ka ogow.
Dadka qaarkood ma aha inay ka codsadaan iyaga oo u mara MNsure. Caadi ahaan kuwan waxa ka mid ah dadka waayeellada iyo naafada ah:
Haddii aad 65 jir tahay ama ka wayn tahay, fadlan eeg bogga ka sheekaynaya sida loo codsado haddii aad tahay qof waayeel ah.
Haddii aad naafo tahay, fadlan fiiri bogga ka sheekaynaya sida loogu codasado dadka naafada ah.
Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo codsiga?
Arrimaha caymiska caafimaadka ayaa ah kuwo isku murgsan. Khasab kuguma aha inaad kaligaa kala furfurto.
Uga wac Xafiiska MinnesotaCare telefoonka 651-297-3862 ama 800-657-3672 si aad u hesho caawimo ku saabsan su'aalaha ama si aad caawimo ugu hesho codsi warqad ah.
La xiriir xafiiska kuugu dhow ee deegaankaaga ama xafiiska qabiileed.
Haddii aad naafo tahay, ka la xiriir Disability Hub MN telefoonka 866-333-2466.
Haddii aad 65 jir tahay ama aad ka wayn tahay, kala xiriir Senior LinkAge Line telfoonka 800-333-2433.
Uguma qalanitd heerkaaga socdaal awgeed miyaa?
Gargaarka Caafimaadka Degdegga ah (Emergency Medical Assistance ) ayaa siiya caynsanaanta daryeelka iyo daawaynta xaaladaha caafimaad ee degdegga ah ee loogu talagalay dadka reer Minnesota ee aan lahayn heer socdaaled uqalma Caawimada Caafimaadka (Medical Assistance). EMA waxay caymisaa xaaladaha caafimaad ee haddii aan la daaweyn 24-48 saacadood gudahood:
Caafimaadkaaga gelin doona halis daran oo.
Hawlgalka jirkaaga u keena waxyeello wayn.
U keena hawlgabnimo daran waaxayaha ama qaybaha jirkaaga qaarkood.
Xaaladaha caafimaad ee degdegga ah waxa ka mid ah foosha iyo ummulitaanka.
Gargaarka Caafimaadka Degdegga ah ayaa walibana caymin kara qaarkood daryeelka iyo daawaynta loogu talagalay xaaladaha iyo adeegyada kale ee lagu bixiyo goobaha kale, oo ay ka mid yihiin kansarka, hawlgabka kelyaha (dialysis), ku-tallaalidda kelyaha, iyo daryeelka lagu helo guryaha xannaanada, goobaha deggenaanshaha daawaynta dhimirka, xarumaha bulshada iyo guryaha.
Waxaad ka codsan kartaa Gargaarka Caafimaadka Degdegga ah adiga oo u mara xaafiska xaafadaada, deegaankaaga ama xafiiska gobolka ama xafiiska qabiileed.
Ma u Baahan Tahay Caawinaad oo Luqaddaada ah?
Wac qatkatooska ah ee Qaxootiyaasha iyo Soogalootiga ee COVID-19si aad u hesho xog ku saabsan goobaha baaritaanka iyo taageerada caafimaadka la xariirta.
Sidoo kale dadka qatka soo waca waxay heli karaan xog ku saabsan baahiyaha aassaasiga ah, taageerada waxbarashada masaafada fog, shaqada, baahiyaha dhaqaale iyo hanaanka ku aaddan muwaadinimada. Shaqaalaha qatka tooska waxay ku hadlaan Amharic, Anuak, Crabi, French, Hindi, Karen, Lingala, Luganda, Mashi, Oromo, Soomaali, Isbaanish iyo Sawaaxili. Qatka caawimaada luuqada ayaa lagu heli karaa luuqad kasta oo kale. Qatka tooska ah wuxuu furan yahay laga bilaabo 9 a.m. ilaa 5 p.m. Isniinta ilaa Jimcada.
Hubinta marin u helitaanka daryeelka
Waaxda Adeegyada Dadwaynaha waxay samaysay dhowr isbaddal oo kumeelgaar ah si ay ugu fududaato isqorayaasha Medical Assistance iyo MinnesotaCare inay haystaan caynsanaantooda iyo marin u helitaankooda daryeelka si badbaado leh muddada lagu jiro safmareenka.
Waad haysan doontaa caynsanaanta Medical Assistance iyo MinnesotaCare illaa inta lagu jiro xaaladaha degdegga ah ee wakhtiga nabadda ah ee COVID-19 haddii aad ka guurto gobolka ama si ikhtiyaari ah aad u weyddiisato in la xiro kiiskaaga.
Hadda waxaad u haystaa marin ballaaran isgaarsiinta caafimaadka (telemedicine): wicitaannada telefoonka hadda waxa loo arkaa booqashada isgaarsiinta caafimaadka, ma laha xaddid tirada booqashooyinka isgaarsiinta caafimaadka ee aad heli karto toddobaad gudihiis, booqashadaada ugu horreysa ee bixiyaha daryeelka ayaan hadda waxa ka dambeeya u baahnayn waji ka waji in la isku arko, waxaanad hadda marin u heli kartaa daawayn intii hore ka badan badan oo caafimaadka dhimirka ah iyo jirrada isticmaalka maandoriyaha daaweynteeda oo loo maro isgaarsiinta caafimaadka.
Waxaad hadda heli kartaa sahay 90-maalmood oo ah daawooyinka aan la-kantaroolin ee u dhakhtarku qoro ee joogtaynta ah.
Haddii aad hesho adeegyada guriga- iyo jaaliyadda- salka ku haya ee hoos yimaad Gargaarka Caafimaadka (Medical Assistance), waxaad ku heli doontaa qiimayntaada oo lagu hawlgaliyo telefoonka ama booqashada, oo maareeyaha kiiskaaga ayaa kula hawlgalin kara telefoon ama fiidiyow booqashooyinkaaga.
Maamulaha kiiskaaga ayaa ku hawlgali kara telefoonka ama fiidiyaha booqashooyinka loogu talagalay adeegyada qaarkood ee maaraynta bartilmaansan ee kiiska.